Midkiinna ma yaqaan ee lagu beddelan karo in Samsung Kies? Waxaan leeyahay software qashinka this on afar ka hawlgala nidaamyada iyo anigu ma ku xidhi karaa telefoonka (Galaxy S2) in mid ka mid ah um. Waxaan si ay u awoodaan inay ku xirmaan nidaam jir XP isticmaalo laakiin taasi ma sii hadda ka shaqeeya si Waxaan yaabiyay ...... baahan hadal fiican. All aan doonayo inaan sameeyo waa u hesho photos aan iska telefoonka, laakiin Samsung u muuqataa in waaxda software ka maqnaato.
Thanks to ay interface kooban iyo isticmaalka lacag la'aan ah, Samsung Kies waxaa si balaadhan loo isticmaalo maamulka qalab Samsung on computer socda Windows iyo Macintosh. Si kastaba ha ahaatee, Samsung Kies ma u san yahay iyo waxa ay leedahay ayna duleella qaar ka mid ah in aad ka tagto qanacsanayn. Qaar badan oo dadka isticmaala Samsung caban in Samsung Kies ku guuldareysto in ay ku xidhmaan qalabka ay. Ka sokow, waxaa la isticmaalaa oo kaliya qalab Samsung. Marka ay timaado in maaraynta qalab kale, sida HTC, LG, Motorola, Samsung Kies soo baxday in ay waxtar lahayn. Haddii aad siin Samsung Kies iyo raadinayso xal kale, waxaad halkan u joojin kartaa. Halkan waxaa ku qoran liis ay ku saabsan 6 kale oo Samsung Kies, waxaad dooran kartaa mid ka mid ah ugu fiican naftaada.
Samsung Kies waa qashinka, ayaad u malaynaysaa si?
1. Alternative for Kies - MobileGo
MobileGo bixisaa hal-stop xal in aad ha xog gurmad ah oo ku saabsan qalabka Android si aad u computer ka mid ah. Waxaad isticmaali kartaa in ay eegista gurmad waxa aad rabto qalabka Android sida xiriirada, photos, music, video iyo in ka badan. Maamul dhan nololeed mobile ah oo hal meel ku haboon.
* Ogaaw in aad xor si ay u gudbiyaan xogta u dhexeeya Android iyo PC.
* Download, maareeyaan, music soo dejinta / dhoofinta, VideoClips, sawiro
* qalabyo ay awood leh si ay u maareeyaan / dhabarka / celinayo xiriirada, SMS, calllogs, barnaamijyadooda iwm mobile
muuqaalada * xoojiyay si aad mobile ammaankooda, nadaafadooda iyo dhaqso
* Qaado buuxda gacanta aad mobile ku computer, raaxaysan kulan aad on Big Screen
2. Dooro kale - MobileTrans
Wondeshare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac waxaa loo arkaa kale ah ugu fiican in Kies. Waxaa si buuxda la jaan qaada labada Windows iyo Macintosh, loo adeegsado maaraynta wax kasta oo qalabka Android. Samsung ka sokow, waxaa ka shaqeeya HTC si fiican, LG, Motorola, Google, ZTE, Sony, Huawei, iyo in ka badan.
* 1 riix si aad xogta ka soo qalab Samsung wareejiyo kale.
* Taageerada ku dhowaad dhammaan noocyada kala duwan ee qalabka Samsung, ka sii badan intii Kies.
* Kuu ogolaanayaa inaad si ay u gudbiyaan xiriirada, fariimaha, sawiro, video, music, wac log, jadwalka iyo barnaamijyadooda 1 click.
* Ka sokow ka Samsung in Samsung, waxaad sidoo kale ku wareejin karaa macluumaadka u dhexeeya qalabka kale ee Android, taageerto ilaa 3K qalabka.
* Sidoo kale, aad wareejin karaan macluumaadka u dhexeeya OS kala duwan, sida dhexeeya macruufka iyo Android, sidoo kale Symbian.
* Taageerada wareejinta gurmad file ka Kies, Blackberry, Lugood, iyo iCloud in aad qalabka macruufka Android ama.
* Waxaad sameyn kartaa in gurmad iyo soo celinta xog ku saabsan qalabka Android iyo macruufka si aad u ismariyaan computer.
MyPhoneExplorer waa sahamisa fududahay in la isticmaalo telefoonka MAARAYNTA qalab Android Sony oo kale. Si aad u xirmaan Android la MyPhoneExplorer ah, waxaad haysataa saddex ikhtiyaar: WiFi, cable USB iyo Bluetooth.
Waxay kaa caawinaysaa inaad isku dubarido files kaarka SD, u hagaagsan Outlook, Thunderbird, iyo soo dejinta iyo dhoofinta SMS. Si kastaba ha ahaatee, ma aysan aad u ogolaato in ay gurmad iyo soo celiyo qalabka Android aad ee 1 click. Waxaa kaliya oo diyaar u ah maamulka sawir. Sida music iyo video, waxaa soo baxday in ay waxtar lahayn. Taa ka sii daran, marka ay timaado app maamulka, waxa keliya oo kuu ogolaanaya in aad tirtirto barnaamijyadooda, kaas oo aad si toos ah qalabka Android samayn karaa.
4. Alternative si Kies - MOBILedit
MOBILedit waa boosteejo ah oo la shaqeeya telefoonada badan iyo murriyado socda Android, macruufka, Symbian, Blackberry, Windows Mobile, Bada, iyo kuwa kale OS via WiFi, Bluetooth iyo cable USB.
Sidaa daraadeed, aad jiidi karaan jeedi photos, music, videos iyo waraaqaha u dhexeeya aad telefoon oo kiniin ah iyo PC, samee ringtones, abaabulo xiriirada iyo maarayn barnaamijyadooda. Ka sokow, raad raac aad telefoon oo kiniin ah oo soo celiyo markaad u baahan tahay.
Mid ka mid ah khaladkaasi waa in MOBILedit bixin ma waxaad kala soo bixi xarunta. Waxay ka dhigan tahay, haddii aad rabto in aad kala soo bixi wax si aad telefoon oo kiniin ah, aad u leeyihiin in ay ka soo dejisan in PC ugu horeysay, ka dibna dajiyaan in aad telefoon oo kiniin ah.
5. Alternative in Samsung Kies - AirDroid
Sida ay magaceeda soo jeedisay, AirDroid waa codsi kaa caawinaya in aad u maamuli telefoonka aad Android oo kiniin ka badan hawada. Waxaa aad u saamaxaaya in ay xaalkaa SMS oo u soo dir via computer, si deg deg ah loo soo dajiyo iyo dhoofinta barnaamijyadooda, guuraan video, sawiro, ringtones iyo kuwa kale iyo marka telefoonka aad Android oo kiniin ah. Si kastaba ha ahaatee, ma ahan diyaar u ah in aad dib ama soo celin telefoonka aad Android oo kiniin ah.
6. Samsung Kies kale - doubleTwist
doubleTwist waa inta badan loo isticmaalaa si aad u hagaagsan music, video iyo sawiro ka Lugood in telefoonka gacanta wirelessly ama la cable USB ah. Si kastaba ha ahaatee, waxa aan waxba ahayn si ay u maareeyaan xiriirrada, SMS iyo barnaamijyadooda ku saabsan telefoonka mobile samayn karo, iskaba daa dib ugu soo celiyo iyo telefoonka gacanta.
3 Siyaabaha Bedelka Lugood in Samsung
Ku rakib, uninstall, Update Samsung Kies on PC
Ku rakib, uninstall, Update Samsung Kies on Mac
Xogta laga Android Bedelka in Samsung
Xogta laga HTC dhaqaaq Samsung
> Resource > Android > Top 6 Samsung Kies lagu bedelan karo